स्‍वर्गको राज्‍यमा सबैभन्‍दा महान्‌ को हो?सबैले एकपटक हेर्नु – Milappost
स्‍वर्गको राज्‍यमा सबैभन्‍दा महान्‌ को हो?सबैले एकपटक हेर्नु
milapamosh | September 15, 2019 | Comments
1. त्‍यही समय चेलाहरू येशूकहाँ आएर सोधे, “स्‍वर्गको राज्‍यमा सबैभन्‍दा महान्‌ को हो? 2. उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभ्‍याउनुभयो, 3. र भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरूजस्‍ता भएनौ भने कहिल्‍यै स्‍वर्गको राज्‍यमा पस्‍नेछैनौ। 4. जसले यो सानो बालकजस्‍तै आफूलाई नम्र तुल्‍याउँछ, त्‍यही स्‍वर्गको राज्‍यमा सबैभन्‍दा महान्‌ हुनेछ।
5. जसले मेरो नाउँमा एउटा यस्‍तो बालकलाई ग्रहण गर्छ, त्‍यसले मलाई ग्रहण गर्छ। 6. “तर जसले ममाथि विश्‍वास गर्ने यी सानाहरूमध्‍ये एक जनालाई पाप गर्न लाउँछ, बरु त्‍यसको गलामा ठूलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधेर त्‍यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्‍छ। 7. “पाप गर्न लाउने परीक्षाहरूका निम्‍ति यस संसारलाई धिक्‍कार! पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्‍कार, त्‍यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ! 8. तिम्रो हात वा खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्‍यसलाई काटी मिल्‍काइदेऊ। दुवै हात वा दुवै खुट्टासाथ अनन्‍त आगोमा फालिनुभन्‍दा त बरु लुलो वा लङ्गडो भएर जीवनभित्र पस्‍नु तिम्रो निम्‍ति असल हुन्‍छ।
9. तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्‍यसलाई निकालेर फालिदेऊ। दुवै आँखासाथ नरकको आगोमा फालिनुभन्‍दा त बरु कानो भएर जीवनभित्र पस्‍नु तिम्रो निम्‍ति असल हुन्‍छ। 10. “होशियार रहो, तिमीहरूले यी सानाहरूमध्‍ये एक जनालाई पनि हेला नगर। किनभने म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, स्‍वर्गमा तिनीहरूका दूतहरूले स्‍वर्गका मेरा पिताको दर्शन सदैव गरिरहन्‍छन्‌। 11. किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई बचाउन आएको हो।
12. “तिमीहरू के विचार गर्छौ? कोही मानिसका सय भेड़ामा एउटा भड्‌केर गयो भने, उसले उनान्‍सय वटालाई छोड़ेर पर्वत हुँदो गएर त्‍यस भड्‌केर जाने एउटालाई खोजी गर्न जाँदैन र? 13. यदि उसले त्‍यसलाई भेट्टायो भने, साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, ती भड्‌केर नजाने उनान्‍सयभन्‍दा त्‍यस एउटाको लागि ऊ बढ़ी रमाउनेछ। 14. यसरी नै स्‍वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको यो इच्‍छा छ, कि यी सानाहरूमध्‍ये एक जना पनि नष्‍ट नहोस्‌।
15. “तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्‍यो भने, गएर तिमीहरू दुई मात्र हुँदा त्‍यसको दोष देखाइदेऊ। त्‍यसले तिम्रो कुरा सुन्‍यो भने, तिम्रो भाइ आफ्‍नो भयो।
16. तर त्‍यसले सुनेन भने आफ्‍नो साथ अरू एक वा दुई जनालाई लैजाऊ र दुई अथवा तीन साक्षीद्वारा प्रत्‍येक कुरा पक्‍का होस्‌।
17. यदि त्‍यसले तिनीहरूका कुरा पनि सुन्‍न इन्‍कार गर्‍यो भने, मण्‍डलीलाई भन। त्‍यसले मण्‍डलीको कुरा पनि सुन्‍न इन्‍कार गर्‍यो भने, त्‍यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउनेसरह होस्‌।
18. “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूले पृथ्‍वीमा जे बाँध्‍छौ, त्‍यो स्‍वर्गमा बाँधिनेछ। अनि तिमीहरूले पृथ्‍वीमा जे फुकाउँछौ त्‍यो स्‍वर्गमा फुकाइनेछ।
19. “फेरि म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, पृथ्‍वीमा तिमीहरूमध्‍ये दुई जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्‍यौ भने, त्‍यो स्‍वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्‍ति हुनेछ,
20. किनकि जहाँ दुई कि तीन जना मेरो नाउँमा भेला हुन्‍छन्‌, त्‍यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु।
शुभ बिहानी ।। पाथीभरा माता को दर्शन गरी आजको राशिफल हेर्नुहोस्
आज विश्वकर्मा पूजा, फलामे औजारको पूजा गरिदै
दैलेखमा कुमार केटो मन्दिरमा चढाइन्छ !
किन प्रार्थना सुनुवाई हुन्न ? सबैले एकपटक हेर्नुस्